Mozilla inopa yavo yakavhurika sosi IoT chikuva: WebThings | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inopa yavo yakavhurika sosi IoT chikuva: WebThings
Mwedzi mishoma yapfuura, takataura newe pano pane blog nezve Zvinhu Gateway chirongwa icho Mozilla yaive ichigadzira yeInternet yezvinhu (IoT), uri iweIyo yepasirese dura yekuronga kupinda kune akasiyana siyana ezvikamu zvevatengi uye IoT zvishandiso.
Uye zvakanaka, mushure memakore maviri ekuyedza uye kusimudzira, Mozilla yakaunza iyo WebThings chikuva, iri fusion yezvakagadzirwa kare WebThings Sisitimu uye WebThings Gateway mapurojekiti.
Aya mapurojekiti maviri eMozilla akapa zvikamu zvekuwana akasiyana siyana ezvigadzirwa zvevatengi uye kushandisa yepasirese Web Zvinhu API kuronga kudyidzana navo. Izvo zviitiko zveprojekti zvinogoverwa pasi peMPL 2.0 rezinesi.
1 WebThings, chirongwa chekupedzisira
1.1 WebThings Gateway - software
1.2 WebThings Sisitimu - chikamu chinosangana neAPI
2 Nzira yekuwana sei WebThings Gateway?
WebThings, chirongwa chekupedzisira
Nekubatanidzwa kwezvirongwa zvambotaurwa, WebThings yakabuda iri chimiro chinopa seti yezvinhu zvinotsiviwa zvekugadzira zvishandiso zveIoT iyo inogona kudyidzana yakananga uchishandisa iyo Webhu Zvinhu API.
Kwakadaro michina inogona kuongororwa otomatiki nemagedhi akavakirwa paWebThings Gateway kana software yemutengi (inoshandiswa neMDNS) yekutarisa inotevera uye kutonga pamusoro peWebhu.
Sevhisi yekumisikidza yeWebhu Zvinhu API zvakagadzirirwa muchimiro chemaraibhurari muPython, Java, Rust, Arduino, uye MicroPython.
WebThings Gateway - software
WebThings Gateway iri rukoko rwepasi rose kuronga kupinda muzvikamu zvakasiyana zvevatengi uye zvishandiso zveIOT, kuviga hunhu hwepuratifomu imwe neimwe uye pasina kuda kushandiswa kweanotengesa-akananga mafomu.
Iwe unogona kushandisa ZigBee uye ZWave protocols, WiFi kana yakanangana kubatana kuburikidza neGPIO Kubata pamwe neGateway's IoT mapuratifomu akagadzirirwa akasiyana siyana Raspberry Pi mamodheru, mapakeji eOpenWrt neDebian aripowo.
Uyu inogona kuiswa paRaspberry Pi uye uwane smart smart control system iyo inosanganisa ese maIoT zvishandiso mumba uye inopa maturusi ekutarisa uye kuatonga iwo kuburikidza newebhu interface.
Iyo chikuva zvakare inokutendera kuti iwe ugadzire mamwe ekushandisa ewebhu ayo anogona kusangana nemidziyo kuburikidza neWebhu Thing API.
Saka pachinzvimbo chekuisa yako nharembozha yemhando yega yega yeIoT chishandiso, unogona kushandisa imwechete, yakabatana yewebhu interface.
WebThings Sisitimu - chikamu chinosangana neAPI
Izvi ndizvo muunganidzwa wezvinhu zve software inoshandiswazve ine sebasa guru rekuvaka iwo mawebhu webhu pachavo, iyo inoburitsa pachena iyo Webhu Chinhu Chinhu API.
Izvi zvinoreva kuti vanogona kuwanikwa neWebhu reZvinhu gedhi kana mutengi, izvo zvinobva zvangoona otomatiki kugona kwechigadzirwa uye nekuzvitarisa nekuzvidzora pamusoro pewebhu.
WebThings Gateway maficha senge kuwanikwa kwechigadzirwa padandemutande remuno, kusarudza kero yewebhu kuti ubatanidze kumidziyo kubva paInternet kugadzira maakaundi kuti uwane iyo yegedhi yewebhu interface, inobatanidza zvishandiso zvinotsigira zvine kodzero ZigBee uye Z-Wave protocols.
Izvo zvakare zvinokutendera iwe kudzima zvishandiso kubva kune webhu kunyorera, kure kure kutarisa mamiriro eimba uye vhidhiyo kuongorora.
Mukuwedzera kune iyo webhu interface uye API, iyo gedhi zvakare inopa rutsigiro rweyedzo yekutonga kwezwi, iyo inobvumidza kuzivikanwa uye kuitwa kwemirairo yezwi.
Nzira yekuwana sei WebThings Gateway?
Kana iwe uine michina yakasiyana kana Hardware iyo iwe yaunogona kupa yakanakisa kushandiswa neiyi purojekiti.
Unogona kuisa WebThings Gateway nenzira yakapusa. Ivo vanongoda kurodha pasi firmware yakapihwa kune iyo SD kadhi yeRaspberry yako Pi.
Kana izvi zvaitwa, iwe unofanirwa kuvhura iyo "gateway.local" faira uye gadzirisa kubatana kune WiFi, ZigBee kana Zwave.
Saizvozvowo, ichave iri mukutarisira kwekutsvaga zviripo IoT zvishandiso izvo zvinokupa iwe mukana wekugona kumisikidza parameter ekunze kuwana uye kugona kuwedzera anofarirwa kwazvo zvishandiso kuchiratidziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mozilla inopa yavo yakavhurika sosi IoT chikuva: WebThings
Marcus Hutchins anoteterera mhosva yekuba mhosva